Ndị Akaụntụ DNS | Business Advisory Franchises | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»DNS Accountants Franchise
Wepụta ọdịnihu gị na DNS Accountants Franchise na azụmahịa nke gị site na ohere anyị gosipụtara. Site na Franchise nke Akaụntụ DNS anyị na-enye gị ngwaọrụ niile na nkwado ịkwesịrị itolite omume ịme akaụntụ gị na-enye gị ohere ịrụ ọrụ maka onwe gị mana ọ bụghị site na onwe gị na enweghị ihe egwu ịmalitere na nke gị nwere ike ịnwe. Would ga-esonye aha a ma ama ma mara ụbọchị ahụ site na ụbọchị 1. Anyị na-eduzi gị na akụkụ niile nke azụmaahịa ahụ iji hụ na nke gị ga-aga nke ọma na afọ 15 anyị nwere ahụmịhe.
Mee ihe ị kacha mma ma anyị enye ndị ọzọ!
DNS ga-enyere gị aka:
Gbapụ ndụ ụlọ ọrụ mana rụọ ọrụ na ọhụụ na nkwado ụlọ ọrụ.
Jide ọrụ gị na nnwere onwe ego.
Mee ihe kachasị nke ahụmịhe gị na iru eru gị.
Na-anagide mgbanwe nke teknụzụ.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ DNS?
Ọzụzụ na nkwado-We na-enye gị ọzụzụ niile, Nchịkwa na Back Office Nkwado ọ bụghị naanị ịmalite ka ị bido mana iji hụ na ị gara n'ihu itolite ma wuo azụmaahịa na-aga nke ọma na mpaghara naanị gị. I nwekwara ike gbasaa n'ime ọtụtụ ókèala. Nkwado anyị na-enye site n'aka ndị ọkachamara ọkachamara na ndị ọkachamara ruru eru.
Ihe ngwugwu anyi- na-enye gị ohere ịrụ ọrụ na mpaghara naanị gị
Mgbanwe nhọrọ- Anyị na-enye ngwugwu na-agbanwe agbanwe iji kwado ahụmịhe ị na-aza ajụjụ iji jide n'aka na ị nwetara nkwado na nka ịchọrọ ... mgbe ịchọrọ ha. Ọbụna anyị nwere ike ịnye atụmatụ ịkwụ ụgwọ maka ego aha aka ya
Emepụtara na ndu- Iji nyere gị aka ịmalite, anyị na-enye gị ụlọ ọrụ na - eduga ọtụtụ ndị na - eduga dịka akụkụ nke ngwugwu izizi gị iji kwado azụmaahịa gị na - eto eto site na nhọrọ iji mee ka usoro ndị a na - aga n'ihu na usoro azụmaahịa anyị gosipụtara.
Anyị onwe anyị pụrụ iche ojii dabeere software- Ozugbo nweta ihe ndekọ ndị ahịa gị & usoro ịkọ akụkọ & njikwa gị oge ọ bụla, ebe ọ bụla. Jikọọ na mgbanwe mgbanwe ego anyị!
Otutu ndi mmeri- anyị bụ ndị mpako nke anyị rụzuru ebe a na DNS na kwuo na anyị ndibọhọ ruo ụbọchị gụnyere n'okpuru na ọtụtụ ndị ọzọ nwere ike hụrụ na anyị prospectus.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwụ ụgwọ nwere ego ma ọ bụ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ego nwere nnukwu azụmaahịa, ụgbọala na agụụ na-akpọtụrụ anyị taa iji chọpụta ihe gbasara ohere anyị dị egwu.